गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म ३ दिन आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलन २६ बुँदे विश्व नेपाली स्वास्थ्य घोषणा पत्र समेत जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
सम्मेलनबाट प्राप्त विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावअनुसार घोषणा पत्रमा आबश्यक कुराहरु थप गर्दै लैजाने समितिका अध्यक्ष डा. संजिव सापकोटाले बताउनु भयो । घोषणा पत्रले विश्वभरी छरिएर रहनु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको डा. सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो ।